WARARKII WERGEYSKA OGAAL MAANTA OO ISNIIN AH 20 APRIL 2009 | Toggaherer's Weblog
MADAXDA XISBIGA UCID EE AWDAL IYO SALAL OO SOO DHAWEYEY BAAQII LABADA XISBI
WARARKII WERGEYSKA OGAAL MAANTA OO ISNIIN AH 20 APRIL 2009
Ciidanka Qaranka iyo Xoolo-dhaqato isku khilaafay Daaqa Mashruuca Wajaale
Wajaale (Ogaal) – Ciidamada qaranka Somaliland iyo dad xoolo dhaqato reer guuraa ah ayaa isku maandhaafay deegaanka Mashuurca dawlada ee duleedka Wajaale, ka dib markii ay dhamaatey mudo todobaad ah oo ciidamadu ku wargeliyeen dadkaas xoolo dhaqatada ahi inay kaga guuraan dhulka Mashruuca oo ciidamadu beertaan sanad kasta waqtiyadan oo kale.
Dadkan reer guuraaga ah oo intii roobabka xiliga gugu bilowdeen ku soo hayaamay deegaanka Mashruuca dawlada ee Wajaale ayaa cabasho xoog leh ka muujiyey tacadi iyo gacan ka hadal ay sheegeen in ciidamada dawladu kula kaceen, Islamarkaana ka gubeen Oodii dayr ahaanta ay u isticmaalayeen, kuwaasoo oo cabashadooda gaadhsiiyey maamulka Degmada Wajaale.
Hadaba, si aanu faah-faahin dheeraad ah uga helo dhacdadan, waxa Wargeyska Ogaal xalay khadka Telefoonka wax kaga weydiiyey Gudoomiyaha Degmada Wajaale Cumar Aadan Qaasaali, ugu horeyna waxa uu ka hadlay xaalada guud iyo sababta dadkan ku kaliftey inay ku soo hayaamaan Banka Wajaale. Waxana hadalkii gudoomiyaha ka mid ahaa “Jawiga guud marka la eego, deegaanka Wajaale nimcaa ku da’day daaq aad u qurux badan ayaana ka soo baxay, markaa taasi waxay sababtey in dad reer guuraa ah oo xoolo dhaqato ahi ku soo hayaamaan, dadkaas waa ay ku adkaatey inay sii dhex daganaadaan Beerihii dadka gaarka ahi lahaayeen oo dhibaatooyin ayaa ka dhex dhecey. Taasina waxay keentay inay Mashruuca dawlada u soo guuraan oo degaan.”
Gudoomiyaha Degmada Wajaale oo ka hadlaya goorta ay ka warheleen khilaafka ka dhex oogan ciidanka iyo dadka xoolo dhaqatada ah, waxa uu yidhi. “Markaa, annaga (Maamul ahaan) Saaka (Shalay) ayay na soo gaaadhey warbixintaa sheegeysa ee ay dadku leeyihiin waxa lanaga gubay Oodihii dayrka u ahaa, ilaa 35-qof oo dadkaa ka mid ah oo aad u cabanaya ayaa noo yimi.”
Waxa uu sheegay inay markaa maamul ahaan iyo taliska ciidanku shalay galinkii danbe ku baxeen si ay u soo hubiyaan dhacdadan iyo cabashada dadka. “Dadkii waanu isugu yeedhney, Horta, dabkii iyo oodihii ay ka cabanayeen ee ay lahaayeen waa lanaga gubay waanu soo weynay.. laakiin, xiliga moosinka ah ee loo diyaar-garoobayo qodaalka dhulka ayay ciidamada iyo Dadku isku af-garan waayeen, khilaafkuna ka dhashay, qolo waxay tidhi wakhtigii qodaalka ayaa la diyaar-garaynayaa, qolona waxay tidhi meel aanu u guuro ma hayno. Markaa, waanu dhex-galay, waxana aanu ku balanay in dadka loo qabto xili ay ku guuri karaan oo duruuftooda iyo xaalada xoolohoodana lagu eego, sidoo kalena la qiimeeyo in aanu lumin waqtiga diyaar-garowga dhul beereedku, taasna waanu isku afgaranay.” Sidaas ayuu yidhi Gudoomiyuhu, waxaana uu sheegay in ay dadka reer guuraaga ah u sameeyeen Gudoomiye, Islamarkaana waxa uu ku dooday in hawshaasi si fiican ugu soo dhamaatey. Ayna hadhsantahay uun kaliya in dadka loo qabto wakhti ay ku guuri karaan oo rasmi ah iyadoo ayuu yidhi ay ka dhamaatey mudadii hore loogu qabtey inay kaga guuraan dhulka dawlada.
Xildhibaano dalbaday in la cadeeyo Lacagtii horumarinta Gobolada Bari
“Beelaha Dhexe hadday isku xuuxinayaan
dagaalkii Sokeeye kuwii ay wax ka tirsanayeena…”
Gudoomiye ku xigeenka labaad ee Wakiillada………….Shir jaraa’id
Hargeysa(Ogaal) – Mudanayaal ka soo jeeda Gobolada Sool, Sanaag bari iyo Buuhoodle oo ka tirsan Golayaasha Baarlamaanka ayaa naqdiyey qaab beeleysan oo ay sheegeen in loo dhigo baryahan danbe ololihii ka dhexeeyey Saddexda Xisbi Qaran, Islamarkaana waxa ay ku taliyeen in eedaha la isu jeedinayo laga daayo xanafta iyo hadal haynta dagaalkii Sokeeye.
Xildhibaanadan oo shir jaraa’id ku qabtey shalay magaalada Hargeysa, waxa kale oo soo qaadeen dhaqaale loo qorsheeyey horumarinta Gobolada Sool, Sanaag Bari iyo Buuhoodle oo ay sheegeen in aan la hayn meel ay ku baxdey iyo qaab loogu tagri falay midna.
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Wakiilada Somaliland Md. Baashe Maxamed Faarax oo xildhibaanadan hor kacayey ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadley muranka Siyaasadeed ee dalka. “Shalayto waxaanu galnay shir, Xildhibaano ka socday Wakiilada iyo Guurtida oo ka soo jeeday Beelaha Harti ee Somaliland intii is haleeli karaysay waxaanu ka wada hadalnay dhawr Qodob oo ay ka mid yihiin xaalada maanta dalku marayo, oo dad badani ka wada hadleen oo aanu isla soo qaadnay Anaguna wixii ay nala noqoto in aanu ka nidhaahno, siyaasada dalku way cakiran tahay laakiin waxay ahayd in xisbiyo lagu ekaado oo saddexda xisbi qaran la isu daayo. Laakiin qabaa’il ayaa loo rogay dagaaladii sokeeye ee wadanka ka dhacay ayaa la soo hadal qaadayaa dagaaladaasina waxaanu u aragnaa inay dhaawac ku yihiin nidaamkii. Beelahaha dhexe haddii ay dagaalkii sokeeye ay isku xuuxinayaan bal kuwii ay iyaguna iyagoo isku dhan ay wax ka sii tirsanayeen maxaad moodaysaa?.” Sidaas ayuu yidhi Gudoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Wakiilladu.
Guddoomiyaha Guddida nabadgelyada iyo difaaca ee Golaha Guurtida Somaliland Md. Cabdisalaan Maxamuud Siciid, oo shirkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay ka shireen sidii ay u midoobi lahaayeen 33 Mudane oo Goleyaasha Baarlamaanka ee Guurtida iyo Wakiilada kaga jira Gobolada Sool, Sanaag Bari iyo Buuhoodle, kuwaasoo uu sheegey inay qaybsan yihiin. “Uma baahnin in xabaalo aynu dib u baadhno oo aynu kala aarsano, waxay ahayd inaynu qabyaalada laabno oo ay ku koobnaato xisbiyada, waxay ahayd inaynu doorasho u diyaar garowno, waxaanan ku baaqaynaa in Arrimahaasi la joojiyo. Waxaan qabaa Anigu in Beelaha dhexe Somaliland [Isaaq] inay tasaamax badan ay bixiyeen oo beelahayaga darafyada, xukunkiina Anagaa haysana oo Madaxweynuhu waa beelaha darafyada iyagoo wax tirsanayay inay haddana tasaamax sameeyeen.” Sidaas ayuu yidhi xildhibaan Cabdisalaan oo ka hadlayey xaalada dalka.
Md Siciid Maxamed Cilmi oo ka mid ah Mudaneyaasha Golaha Wakiilada ayaa cambaareeyay talaabadii ay ciidanka Booliska Somaliland ku xabadeeyeen Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE, waxaanu taasi ku tilmaamay mid sharci darro ah oo xiisad abuuraysa.
Xildhibaan Siciid wuxuu sheegay in aanay xukuumada Somaliland waxba ugu qaban lacagtii ay cashuuraha dalka 2% uga jiraytay horumarinta adeegyada bulshada ee Gobolada Sool, Sanaag barri iyo Buuhoodle.
Md Maxamed Cismaan Bulqaas oo ka mid ah Guddiga dhaqaalaha ee Golaha Wakiillada ayaa waxa uu sidoo kale dhaliiley qaabka loo maamulay Lacagtaasi. “Anigoo ka tirsan Guddida dhaqaalaha ee Golaha Wakiilada aadna ugu dhuun daloola Arrintan 2% cashuuraha dalka looga jaray horumarinta gobolada Sool, Buuhoodle iyo Sanaag Barri, sida la wada ogsoon yahay lacagtaasi 2% ah waxa ansixiyay Golaha Wakiilada waxaana la bilaabay bishii 1-dii Bishii November ee sanadkii 2007-dii, waxaana ka dambeysay 18 bilood, sida uu ahaa qorshaha xukuumada iyo Golaha Wakiiladu ay isla gaadheen go’aan ahaa marka ay lacagtaasi socoto ee la qaado hal sano ee la ogaado in baahiyihii loogu jaray goboladaas lacagta aanay waxba ka qabsoomin in dib loo cusboonaysiiyo oo tallo dambe la iskugu yimaado, si mar kale loo ansixiyo.Arrintaasna xukuumadu way iska indho tirtay oo way jabisay si badheedh ah waxaanay muddadaasi dhaaftay lix bilood.” Ayuu yidhi Xildhibaanku.
Mudane Bulqaas oo ka hadlayay xadiga lacagtaas ayaa dawlada Somaliland ku eedeeyay inay ku tagri fashay, waxaana hadalkiisa ka mid ahaa oo uu yidhi, “Sidaas darteed, waxaanu ummada reer Somaliland iyo Goboladii nalaga soo doortayba aanu u caddeynaynaa inaan Xukuumada Somaliland aanay gaadhsiinin lacagtii 2% ahayd ee ururtay sidii loogu tallo gallay, oo ahayd horumarinta mashaariicda, maamul fidinta ee goboladaasi godoonka ah, lacagtaasi oo ah 22 kun oo Milyan shilin Somaliland ah oo socotay muddo 18 bilood ah, lacagtaasi marka lagu sarifo heerka sarifka baanka waxay noqonaysaa $7 Milyan oo Dollar. Waxa gaadhay 20% wax ka yar, waxaanan cambaareynaynaa Xukuumada Madaxweyne Rayaale oo ku tagri fashay lacagtii laga soo ururiyay shacbiga Somaliland ee nadiifta ah ee ugu tabarucay walaalahood”
Md Maxamed Bulqaas, wuxuu sheegay in lacagtaasi ay xukuumadu ku shubatay wax uu ku tilmaamay jeebado gaar ah si ay ugu isticmaasho olalaheeda siyaasadeed ee UDUB-aysan, waxaanu yidhi “Waxay lacagtaasi ugu tallo gashay inay ku ololeyso oo ay siyaasadaheeda u gaarka ah ee UDUB-aysan u isticmaasho, in la lunsado oo dano gaar ah lagu isticmaalo, in dibadaha loogu dalxiis tago waxna aan laga keenin iyo in xisbiyada mucaaridka ah lagu karbaasho.”
Xildhibaanku wuxuu Wasaarada Maaliyada Somaliland u soo jeediyay inay lacagtaasi halka ay taalo ay soo bandhigaan, si loo wada arko. “Wasiirada Gobolada Sool, Sanaag Barri iyo Buuhoodle kaga jira xukuumada waxaan u soo jeedinaynaa inay war deg deg ah ka keenaan oo ay Madaxweynaha iyo Wasiir Cawil weydiiyaan hantidaas ka maqan goboladooda,”Ayuu yidhi Md Maxamed Cismaan Bulqaas.
Xisbiga Kulmiye oo dacwad u gudbiyey Xeer Ilaalinta Guud iyo filashada isu-soo-baxa maanta
Hargeysa (Ogaal) – Gudoomiyaha Xisbiga mucaaradka ah ee KULMIYE ayaa u gudbiyey xeer ilaalinta guud ee Somaliland dacwad ka dhan ah nin la yidhaahdo Maxamed Xuseen Khaliif oo ay ku eedeeyeen inuu rasaas ku ridey hogaanka iyo taageerayaasha Xisbigaasi.
Qoraal uu ku saxeexanyahay Gudoomiyaha xisbiga KULMIYE Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo nuqul ka mid ahi Wargeyska Ogaal soo gaadhey shalay ayaa waxa xisbigu kaga dalbadey Xeer ilaalinta in arrintaas wax laga qabto. Qoraalkaas xisbiga KULMIYE ku socodsiiyey Xeer ilaaliyaha Guud waxa ku xusan eedo ka dhan ah ninkaasi oo sheegeysa in uu qayb ka ahaa shirqool loo sameeyey madaxda KULMIYE. Eedan waxa ay u cuskadeen, in la sii daayey eedaysanahan iyadoo ay ku doodeen in aan baadhis rasmi ah lagu sameyn, sidaa darteed waxa ay ka dalbadeen xeer ilaalinta in arrintan guddi heer qaran ah oo baadhis ku sameysa loo saaro.
Dhinaca kale, taageerayaasha Xisbiga KULMIYE ayaa la filayaa inay maanta isugu soo baxaan Xafiisyada Xisbigaasi ku leeyahay magaalooyinka Somaliland, ka dib markii ay sidaa ku baaqeen hogaanka xisbigaasi oo ku war-geliyey gudiyada iyo xildhibaanada Golayaasha ugu jira xisbiga inay ka soo qayb-galaan isu soo baxyo nabad-gelyo ah oo ay kulla hadlayaan maanta masuuliyiinta xisbigaasi Taageerayaasha iyo dadweynaha. Wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland oo hore digniin uga soo saartey isu soo baxyada dadweyne ayaa la sheegay inay ka noqotey, ka dib markii xisbiga KULMIYE ku adkeystay, islamarkaana uu taageero dhinaca aragtida ah uga heley Xisbiga UCID. Iyadoo labada xisbi war murtiyeed ay shalay soo wadda saareen ku cadeeyeen in sharcigu u ogolyahay inay sameeyaan isu soo baxyo ay dadkooda kulla hadlayaan.
Dawladda Soomaaliya miyay gudbisay xogta xuduudaha Badeeda?
Oslo (Ramaas/Ogaal)- Masuuliyiinta Wasaaradda Arrimaha dibadda dalka Norway, ayaa soo bandhigay gacan dhaqaale iyo mid farsamo oo ay ka geysatay sidii xogta Badda Soomaaliya loogu gudbin lahaa hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Shuruucda Badda.
Kulan ay Jimcihii aynu ka soo gudubnay Wasaaradda Khaarajiga Norway u qabatay xubno metelayay Soomaalida degen dalkeeda, waxay soo bandhigeen doorkii ay ka qaateen sidii dawladda Kumeel-gaadhka ah ee Soomaaliya Qaramada Midoobay (Oceans and Law of the Sea) ugu gudbisay macluumaadka badda ee dalkaas, ka hor intii aanu ka dhicin waqtigii loo cayimay ee 13 May 2009. Wasaaradda Khaarajiga Norway waxay Soomaaliya ka dhigtay dalka ugu horeeya Qaarada Afrika ee gudbiya warbixinta hordhaca ahayd ee laga doonayay, taas oo wadamo badan oo soo korayaa caqabad ku ah sidii ay warbixintooda u gudbin lahaayeen inta ka horaysa 13 May 2009 oo ah maalinta kama dambeysta ah ee loo qabtay soo gudbinteeda. Waxay sheegtay in Soomaaliya ay u suuragashay ka dib markii ay dawlada Norway bixisay dhaqaalihii suurta geliyey warbixintii laga doonayay oo ay farsamo iyo aqoon ahaanba u suurto gelisay hay’ad hoos tagta Qaramada Midoobay oo marka magaceeda la soo gaabiyo la yidhaahdo GRID-ARENDAL, iyada oo la kaashanaysa urur-goboleedka ECOWAS oo ah dalad ay ku midaysan yihiin 15 wadan oo ku yaala galbeedka Afrika.
Dadkii Soomaalida ahaa ee ka qaybgalay kulankaasi waxay masuuliyiintii ka socday dawladda Norway waydiiyeen su’aalo badan oo nuxur ahaan la xidhiidhay walaac ay ka qabaan heshiiskii is faham ee dhinaca xudduuda badda ahaa ee ay wada galeen dawladda Kenya iyo dawlada Ku meel-gaadhka ah ee Sheekh Shariif, iyada oo ay masuuliyiintaasi ka bixiyeen jawaabo ka duulayay xogta aqooneed ee ay hayaan, taas oo ay si weyn ugu qanceen Soomaalidii ka qayb gashay kulankaas. Isla markaana waxa uu kulankaasi Soomaalida reer Norway ka qaybgashay u suurtogeliyay inay wax badan ka fahmaan Badda dalka Soomaaliya.
7-Nin oo isku Xidh-xidhan oo saxiimad yari keentay Xeebta Laasqoray
Laasqoray (Ogaal) – “Goor gaaban oo galabta ah (Shalay), waxa na soo gaadhey war sheegaya in deegaanka Laasqoray lagu arkay, dad tiradooda lagu sheegay ilaa 8-qof oo isku xidh-xidhan oo Laashyar wadda saaran oo hubkii iyo wixii kale ee ay siteena laga furtey. Warkaasi wuu na soo gaadhey, markaa, cid ayaanu u diray soo hubiya, waanan ka warsugeynaa in la keeno oo ay sheegaan cida ay yihiin iyo cida xidh-xidhay ” Sidaas waxa yidhi Taliyaha ciidanka Ilaalada Xeebaha Somaliland ee Gobolka Sanaag Cabdiraxmaan oo xalay wargeyska Ogaal Ugu xog-waramey khadka Telefoonka isaga oo jooga magaalada Laasqoray .
Markab dagaal oo ka mid ah ciidamada Naato ee ku sugan Biyaha Gacanka Cadmeed ayaa sheegay inay shalay sii daayeen 7 Nin oo ay ku eedeeyeen inay ahaayeen Budh-cad badeed, ka dib markii Ciidamo Dutch ahi ku fuliyeen hawl-gal ay kaga badbaadiyeen Markab ay ku afduubeen 20 bad-maax oo Yamaniyiin ah oo ay mudo todobaad ah haysteen. Kuwaasoo ay shalay sii daayeen ka dib markii sida ay faafisay Wakaalada wararka ee AP ay ka qaadeen Todoba qori oo Ak 47 ah iyo qori Baasuuke ah.
Warar aan la xaqiijin ayaa tibaaxay in Ragan xidh-xidhan ee Laashka yar la soo saarey, ciidamada Naato ku sameeyeen Astaan, hase ahaatee Taliye Cabdiraxmaan oo aanu arrintaa wax ka weydiiney waxa uu sheegay in aanu ka hor-dhaceyn inta la keenayo ragaas ee ay waraysanayaan.
Dhinaca kale Cabdiraxmaan waxa Ogaal wax ka weydiiyey halka ay marayaan hawl-galada ka dhanka ah Koox Sadex Markab ku haysata Xeebaha Deegaanka Laasqoray, waxaana uu taliyuhu sheegay in ciidan ahaan dhinaca bariga iyo Badaba ay kaga xeeran-yihiin. “Meesha waxa lagu haystaa waa saddex Markab, Ciidamada Somaliland-na Badda iyo barigaba waa ay ka joogaan. Duruufaha ku xeeran dadka ay haystaan ayaa saamixi waayey in la weeraro, laakiin awood ay iyagu (Afduubayaasha) leeyihiin maaha midaanu kaga joognaa.” Sidaas ayuu yidhi Cabdiraxmaan, waxaana uu intaa ku daray in ciidan ahaan aaney banaaneyn inay wax wada hadalo ah la galaan Budhcad si looga soo daayo dadka iyo gaadiidka ay gacanta ku hayaan, balse waxa uu tilmaamay inay jiraan Odayaal deegaanka ah oo arrintaa ku hawlan, kuwaasoo uu rajo ka muujiyey inay soo afjaraan arrintan.
Sadex Markab oo laba ka mid ah laga leeyahay Dalka Masar, midna laga leeyahay Dalka Talyaaniga ayaa mudooyinkii ugu danbeeyey ku afduuban Xeebta bariga Sanaag ee Somaliland meel qiyaatii 24 Km, dhinaca bari ka xigta magaalada Laasqoray.
Nuxurka Kulan dhex maray Ra’iisal-Wasaaraha Soomaaliya iyo Dawladda Itoobiya
Addis-Ababa (ENA/Ogaal)- Dawladda Itoobiya ayaa Dawladda Shariif Sh. Axmed ku tilmaantay mid lala jaan-qaadi karayo, isla markaana waxay Bulshada Caalamka ugu baaqday in laga taageero la-dagaallanka Budhcad-Badeedka. Waxaanay sheegtay in aanay ka noqonayn go’aankoodii ahaa in ay taageeraan Dawladda Shariif Sh. Axmed.
Sida lagu baahiyay Wakaaladda Wararka Itoobiya ee ENA, Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Itoobiya Seyoum Mesfin ayaa sheegtay in Dawladdiisu ay taageeri doonto, isla markaana ka go’an tahay in ay is-garab taagaan Dawladda Shariif Sh. Axmed. Waxaanu sidaa ka sheegay kulan uu la yeeshay Wefti uu hoggaaminayo Ra’iisal-Wasaaraha Somalia Cumar Cabdirashiid Cali oo booqasho ku maraya Magaalada Addis-Ababa.
Wasiirka arrimaha dibedda Itoobiya waxa uu sheegay in la gaadhay waqtigii Dadweynaha Somalia ay iskood isku maamuli lahaayeen, isla markaana Beesha Caalamku taageero dheeraad ah u siin lahayd. “Beesha Caalamka waxaa looga baahan yahay inay sameyso taageero dheeraad ah ay u fidayso dawlada KMG ah ee Soomaaliya, iyadoo lagu taageerayo in iyada lala kaashado la-dagaalanka kooxaha Budhcad-badeeda” ayuu yidhi Wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya.
Mr. Seyoum Mesfin waxa uu sheegay in Shirka Urur-Gobolleedka IGAD ay kaga hadli doonaan Dalalka xubnaha ka ah Ururkaasi habkii kor loogu qaadi lahaa taageerada Beesha Caalamka eek u wajahan Dawladda Shariif Sh. Axmed. “Dawladda uu Madaxweynaha ka yahay Madaxweyne Sheekh Shariif waxay leedahay ujeeddooyin cad oo ku saabsan dib u heshiisiin guud” ayuu yidhi Siyum Musfin.
Maaha markii ugu horraysay ee Dawladda Itoobiya ka hadasho Siyaasadda Dawladda Shariif Sh. Axmed, hase ahaatee, Ra’iisal-Wasaaraha dalkaas ayaa hore u sheegay in ay ku qanacsan yihiin dawladda Shariif Sh. Axmed.
Dibax-bax ka dhacay Muqdisho
Muqdisho (W.Wararka/Ogaal)- Banaan-bax lagu taageerayo go’aankii Baarlamaanka dawladda Kumeel-gaadhka ah ee Soomaaliya ku meel-mariyay ku dhaqanka Shareecada Islaamka, ayaa shalay ka dhacay magaalada caasimada u ah Soomaaliya ee Muqdisho.
Dibad-baxaas oo ka dhacay garoonka kubada Cagta ee Konis Stadium, ka sokow boqolaal dadweyne ah, waxaa ka qayb galay Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Soomaaliya, Xildhibaano iyo masuuliyiin kale, isla markaana waxa soo qabanqaabiyay Maamulka Gobolka Banaadir. Wasiirka Kalluumaysiga, ahna Raysal-wasaare Ku-xigeenka Prof. Cabdiraxmaan Ibbi oo isu-soo-baxaa hadal ka jeediyay, ayaa sheegay in talaabadani ay tahay mid horseedaysa in dalka Soomaaliya xasilooni iyo kala dambayn lagu soo celiyo. “Waxaan aad ugu mahadcelinayaa kooxda Xisbul-Islaam oo ka mid ah mucaaradka dawladda, kuwaasoo durba soo dhaweeyay go’aankii Baarlaamaanka ee ahaa in dalka lagu maamulo Shareecada Islaamka,” ayuu yidhi Prof. Ibbi.
Wasiirka Arrimaha gudaha Sh. Cabdiqaadir Cali Cumar oo isaguna hadal ka jeediyay dibadbaxaa, waxa uu sheegay in ansixinta in dalka lagu maamulo Diinta Islaamka ay tahay fursad lagaga bixi karo dhibaatada labaatankii sannadood ee u dambeeyay ka jirtay dalka Soomaaliya. “Soomaaliya waxay ku talaabsatay markii ugu horeysay inay isku maamusho Islaamka, runtiina waa arrin lagu farxo, waxaan qof walba u soo jeedinayaa inuu dawlada taageero, maadaama ay meel marisay ku dhaqanka Islaamka,” ayuu yidhi Sh. Cabdiqaadir Cali Cumar. “Ma jirto cid marmarsiiyo u heli karta wixii maanta ka dambeeya inay dagaalo ka abaabulaan gudaha dalka, waayo dawladu waa mid Islaami ah, kuna maamulaysa shacabka diinta Islaamka.” Sidaana waxa yidhi Wasiirka Cadaalada iyo Garsoorka Sh. Cabdiraxmaan Maxamuud Faarax (Janaqow) oo hadal kooban ka jeediyay halkas. “Qofkii isku daya inuu ka horyimaada dawlada, waxaa cadaan ah inuu yahay qof diinta Islaamka diiday, wacad ayaanan ku maraynaa inaan dagaal adag la galayno,” ayuu raaciyay.
Dhamaan ka qaybgalayaashii dibad-baxaasi waxay muujiyen sida ugu faraxsan yihiin go’aanka Baarlamaanku gaadhay, waxayna ku qaylinayeen erayo ay ku soo dhawaynayaan iyo sida loogu baahanyahay in shacabka ku dhaqan halkaasi uu iska cafiyo dhibaatooyinkii kala gaadhay.
Rab-Dhuure: Shaqaale Soomaali iyo Ajanabi isugu jira oo la afduubay
Rab-Dhuure (W.Wararka/Ogaal)- Kooxo hubaysan ayaa shalay galab degmada Rab-dhuure ee gobolka Bakool ka afduubay Shaqaale Soomaali iyo Ajaanib isugu jira oo u shaqaynayay hay’addo samofal.
Siday wararku sheegeen, falkan oo ay geysteen kooxo aan la aqoosani, waxay shaqaalaha la afduubay oo aan tiradooda la xaqiijin u shaqaynayeen laamaha MSF Holland iyo Biljamka. Warku wuxuu intaa ku daray, in shaqaalahaa la afduubay u socdeen dhinaca degmada Xudur ee xarunta Gobolka Bakool, hase yeeshee markii ay degmada Rab-dhuure ka soo dhaqaaqeen ay gacanta ku dhigeen kooxahaa hubaysan ee qafaashay, waxaana la sheegay in xilligaa la afduubay ay marayeen meel 10 KM u jirta degmada Rabdhuure ee gobolkaas. Warku ma sheegin dalalka ay u kala dhasheen shaqaalahaa la afduubay, waxayna wararka qaarkood sheegeen in markii la afduubay ay la socdeen odayaal deegaanka ahi, isla markaana waxa la sheegay in duqaydaa markii dambe ay kooxahaa hubaysani sii daayeen. Ilaa hadda ma cadda tirada hawlwadeenada la afduubay, hase yeeshee idaacadda Radio New Zealand waxay ku warantay in shaqaalahaa la afduubay sadex qof ahaayeen. Kooxda Al-Shabaab oo inta badan gacanta ku haysa gobollada Bay iyo Bakool ayaan wax war ah ka soo saarin afduubka hawlwadeenadaa samofalka ka shaqaynayay. Isla markaana waxa hore u jiray in Maamulka Al-Shabaab hore gobolladaa fasax ugu siiyay hay’addaha samofalku inay ka shaqayn karaan, taasoo dhiirigelisay hay’addaha dhinaca samofalka ka hawlgala.
Madaxweynaha Philippine oo Bad-maaxiinta dalkeeda ka mamnuucday inay ku safraan Xeebaha Soomaaliya
Manila (W.Wararka/Ogaal)- Haweenayda Madaxweynaha dalka Philippine ayaa Bad-maaxiinta dalkeeda ka mamnuucday inay ku safraan xeebaha dalka Soomaaliya.
Miss Gloria Arroyo war-murtiyeed ay shalay ka soosaartay Madaxtooyada caasimada dalkaas ee Manila, waxay ku sheegtay in gfo’aankani la xidhiidho cabsi ay ka qabaan in kooxaha Budhcad-badeedda Soomaalidu waxyeelo u geystaan muwaadiniinta dalkeeda, sidaa darteedna laga mamnuucay ku safarka xeebta dalka Soomaaliya. Sida uu sheegay Xoghayaha xafiiska Madaxweyne Gloria Arroyo, go’aankani wuxuu ka dambeeyay amaro is xigxigay oo ay haweenayda Madaxweynaha ka ah dalka Philippine ka soosaartay in Bad-mareenada dalkeedu ku safraan xeebaha dalka Soomaaliya oo ay muddooyinkan u dambeeyay ka dilaaceen kooxo Bad-jiif ah oo dhibaato ku haya Maraakiibta isticmaala Marinka Gacanka Cadmeed iyo meelo kale oo ka baxsan intaba. Todobaadkii la soo dhaafay La-taliyaha Madaxweyne Gloria wuxuu sheegay inay si aad ah ula socon doonaan lana shaqayn doonaan Maraakiibta ay la socdaan Bad-mareenada reer Philippine.
Dawladdda wadanka Philippine waxay hore u sheegtay in 17 Bad-maaxiin u dhashay dalkaas kooxaha Budh-badeedu u haystaan Madax-furasho, tan iyo bishii March badhtamaheedii, kuwaasoo xilliyo kala duwan qaarkood la sii daayay. Laakiin, Xukuumadda Manila waxay sheegtay in weli muwaadiniin dalkeeda u dhashay ku jiraan gacanta Bad-jiifka Soomaalida ee Xeebaha Maamul-gobolleedka Puntland ee Waqooyi/bari Soomaaliya.